Inqwelo Yabelusi - I-Airbnb
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguRichard
Ikhabhathi etofo-tofo entliziyweni yeNtili yaseWye kwaye kumda weBrecon Beacons National Park. Indawo yabucala eyimfihlo enemibono yeentaba kunye nentlambo. Ifakwe kwilali entle kunye nomgama wokuhamba ukuya kwi-pub.
Igumbi lokulala elahlukileyo, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle, isitshisi seenkuni, igumbi lokuhlambela, igadi yabucala enebhafu eshushu yangaphandle, ihammock kunye nomgodi womlilo. Ukubuyela emva kwezothando, iholide yosapho okanye kwenye indawo ukuze uphumle kwaye ukhuphe uxinzelelo!
Inqwelo yabelusi sisakhiwo esikhethekileyo esisakhe ukusuka ekuqaleni apha ekuhambeni konyaka. Injongo yethu yokuqala yayikukuphindaphinda i-hut ye-Shepherds ehlala ithandwa, kodwa njengoko yayikhula ngobude, kokubini ubude kunye nobude, yathatha inkangeleko yayo ekhethekileyo kwaye uninzi lwabahlobo kunye nosapho lwethu bayifanise nenqwelo kaloliwe okanye ikhabhathi, kungoko igama layo!
Ukuba unomdla wokubaleka i-hussle kunye ne-bussle yobomi bemihla ngemihla, kwaye undwendwele indawo entle kakhulu kunye neyokuphumla yelizwe kuya kufuneka uthathele ingqalelo i-Shepherds Carriage @ Plaswye.
Ifakwe kwilali entle yaseLlyswen embindini weNtlambo yaseWye, ikhabhathi ibekwe kumhlaba wekhaya lethu kwaye yonwabela indawo engasese esecaleni komlanjana obhibhileyo onemibono efikelela kude kwiiNtaba eziMnyama kunye neWye Valley. Ikhabhinethi ibonelela ngenqanaba lobunewunewu elingafumanekiyo kwiseti ye-glamping, ngelixa igcina yonke into ebalulekileyo ekubuyeleni kwiziseko zokuziva! Inesitiya sayo esikhulu, ibhafu eshushu yangaphandle, apho unokuthatha khona umbono weentaba kunye neenkwenkwezi ebusuku, umgodi womlilo, i-hammock kunye ne-bbq. Abahlali nabo bamkelekile ukuba bazulazule emasimini nakwigadi yethu, ezilingana neehektare ezi-6 apho uBilly wethu onobubele webhokhwe ehlala nomhlambi omncinane weegusha zasezintabeni ezimnyama.
Ngaphakathi, i-cabin ayinakuba yi-cosier, ifudunyezwe sisitshisi sokhuni, inendawo yayo evulekileyo yokuhlala ene-smart TV kunye ne-wifi, i-sofa yekona eguqula ibe yibhedi epheleleyo ephindwe kabini, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nesitovu segesi kunye umpheki, isikhenkcisi sefriji, itafile ehlala ukuya kutsho kwisine kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yombane kunye nendlu yangasese egungxulwayo! Kufikelelwa ngocango olunomgibe kwisilingi kukho negumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi epholileyo ephindwe kabini kunye nebhedi etofotofo. Unokufumana obona busuku bugqwesileyo bokulala, siyenzile! Nokuba kusehlotyeni okanye ebusika uqinisekile ukuba uza kubuya uzive uphumle kwaye uhlaziyekile!
Iindwendwe zinethuba lokwenza okuninzi okanye kancinci njengoko zithanda. Banokuhlala nje behleli kwaye baphole, okanye baphume kwaye bayonwabele izinto ezininzi ukusuka ekuhambeni, ukukhwela inqanawa, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukuhamba ngesikhephe kunye nokubhabha ukuya kwimini eyonqenayo bezibuza malunga nedolophu ekufutshane yencwadi yaseHay eWye okanye kwidolophu yentengiso yaseBrecon, ehlala unyawo lukaPen Y Fan, eyona ntaba iphakamileyo kumazantsi eBritani kunye nenxalenye yepaki yesizwe yaseBrecon edumileyo.
Kukwakho nokuhamba okuhle okuthe ngqo ukusuka emnyango wakho, njengokuhamba kweWye Valley kunye nokunyuka, ngokukhawuleza emva kwekhabhinethi ukuya eBrechfa eqhelekileyo ukusuka apho ufumana umbono omangalisayo we-360 degree kuyo yonke indawo. Kubalobi abanomdla sinokukubonelela ngokufikelela kwindawo yethu yabucala yokuloba kumlambo iwye, umlambo odumileyo wokuloba iisalmon kunye nokuhamba nje okufutshane.
Ukuba ujonge ikhefu lothando, iholide yosapho okanye indawo yokuphola kunye noxinzelelo, siqinisekile ukuba awuzukuphoxeka!
Nceda uqaphele: ukuba ufuna abahlobo kunye nosapho
Ukukujoyina, sikwanayo nendlu yokulala ephindwe kabini efumanekayo yokuqesha, I-Apple House @ Plaswye, ekwaboniswa kule webhusayithi.
5.0 · Izimvo eziyi-331
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi331
Ingingqi yePowys iPowys / iBrecon Beacons ikwindawo yaseBrecon ibekwe kwindawo esembindini kwiPaki yeSizwe kwaye sisiseko esidume kakhulu sabahambi ngeenyawo, abakhweli beebhayisekile zeentaba kunye nabo bakonwabelayo ukuba ngaphakathi kwendawo entle engqonge ilali enezimvo zokuphefumla. Idolophu yecathedral inamaziko olondolozo lwembali ezimbini-iMyuziyam yaseWelsh Borderer kunye neBrecon Cathedral kunye nevenkile kunye necafe. Umbindi wedolophu ephithizelayo uqhelene neevenkile ezininzi kunye neekhefi. Kukho uMnyhadala weJazz owaziwayo waminyaka le obanjwa edolophini ngo-Agasti. ICrickhowell yidolophu encinci, entle kwaye ekhuselekileyo yentengiso yaseGeorgia ebekwe phakathi kwethambeka elisezantsi leNtaba yeTafile kunye nomva weNtaba yeLlangattock enamawa ayo amakhulu ekalika. Umlambo i-Usk, odume ngokuloba iitrout ezilungileyo kunye nesalmon, uqukuqela udlule ujikelezwe yibhulorho enomdla eneziko elinesibini ezijonge ezantsi kunye neshumi elinesithathu lijonge phezulu. Kukho ukuhamba okuninzi okugqwesileyo kwiiNtaba eziMnyama kunye neeBeacon zeBrecon kunye nokukhwela amahashe, ukuloba, kunye nokuhamba ngephenyane konke kunokucwangciswa ekuhlaleni. I-Abergavenny yidolophu yemarike ephithizelayo enemakethi enkulu egqunyiweyo yangaphandle kunye nemarike yenkomo exakekileyo; kukho abavelisi bendawo abaneleyo, iimarike zobugcisa kunye ne-antique kwaye rhoqo ngoSeptemba i-Abergavenny Food Festival idibanisa ubutyebi bendawo abavelisi bokutya, abapheki abadumileyo kunye nabaphulaphuli abathanda ukutya abanomdla. Lo mmandla uhlala usisiseko esithandwayo sabahambi, abahamba ngeebhayisikile, ii-para-gliders, abalobi kunye nabathanda imijelo, kwaye baninzi ababoneleli bemisebenzi yangaphandle. IHay-on-Wye yidolophu yentengiso edumileyo kuMlambo iWye, ehleli kumda ophakathi kweNgilani neWales, emazantsi eeNtaba eziMnyama. Ijongwe ngomdla we-11thc. Inqaba, idolophu inobutyebi bezakhiwo ezidala ezinomdla kunye "neyona venkile inkulu yeencwadi ezisetyenzisiweyo emhlabeni" kwi-cinema endala- enye yeevenkile ezinkulu ze-30 ze-antiquarian, nganye inobungcali bayo. UHay-on-Wye usingathe uMnyhadala woLwazi odumileyo kwihlabathi. I-Builth Wells kumaphandle ase-Mid Wales yahluka kunye namadama amakhulu amahle asebenzisa ubume bendalo bendawo-ngoku esekwe kwiminyaka emininzi kunye nendawo yokuhlala yendalo yazo zonke iintlobo zezilwanyana zasendle kunye neentyatyambo. Kukho ulwandiso olukhulu lwamaphandle avulekileyo apho iRed Kite (enokuthi ijongwe kufutshane kuMaziko amaninzi eRed Kite), ibuzzard, ikestrel kunye nesondo lookhetshe kunye nevili le-hover overhead. INtlambo ePhezulu yeSwansea yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo banqwenela ukuphonononga le ndawo ebizwa ngokuba 'yiLizwe leNgxangxasi', iMonmouth ithatha igama layo ukusuka emlonyeni woMlambo iMonnow, oqukuqela ungene kuMlambo iWye nje emazantsi edolophu. IMonmouth yidolophu ephithizelayo yentengiso enevenkile ezininzi kunye neevenkile ezinkulu. Ii-pubs kunye neendawo zokutyela zibonelela ngokutya okulungileyo. Zonke iintlobo zemisebenzi yangaphandle ziyafumaneka, kukho ukuloba okugqwesileyo kuMlambo iMonnow kunye noMlambo iWye; igalufa ikufuphi kwiRolls yaseMonmouth; I-Hot Air Ballooning kwi-Raglan ekufutshane kunye ne-pony trekking kwindawo; ukuhamba okugqwesileyo kwi-Wye Valley kunye neRoyal Forest yeDean, ukujonga imida yaseWelsh kunye ne-Offa's Dyke Path kwicala elingasentshona le-Brecon Beacons kukho iidolophu zakudala zentengiso zaseLlandeilo naseLlandovery. Zombini ziidolophu zentengiso ezinomtsalane ezineevenkile ezibalaseleyo zasekhaya kunye namaziko olwazi, akhokelela abantu kwiindawo ezininzi zomdla zasekhaya ezinjengeCarreg Cennen Castle. IHay-on-Wye Indawo yeHay-On-Wye iHay-on-Wye yidolophu yentengiso edumileyo kuMlambo iWye, ehleli kumda ophakathi kweNgilani neWales, emazantsi eeNtaba eziMnyama. Ijongwe ngomdla we-11thc. Inqaba, idolophu inobutyebi bezakhiwo ezidala ezinomdla kunye "neyona venkile inkulu yeencwadi ezisetyenzisiweyo emhlabeni" kwi-cinema endala- enye yeevenkile ezinkulu ze-30 ze-antiquarian, nganye inobungcali bayo. UHay-on-Wye usingathe uMnyhadala woNcwadi odumileyo wehlabathi onamanani oncwadi amaninzi adumileyo athatha iqonga.
Ikhareji ikumhlaba wepropathi yethu kodwa ikude ngokwaneleyo ukuze sonke sonwabele ukuba bucala kwethu. Nangona kunjalo, ukuba ufuna nantoni na siyavuya kakhulu ukunika uncedo kunye neengcebiso.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$187
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Llyswen